Ukukhuphela nokuphrinta itafile yexesha okanye ukhangele ezinye iintlobo zeetafile zamaphepha, kuquka iMbonev yangaphambili yetafile yezinto kunye nezinye iitafile zembali zamandulo.
Ithebhile yePeriodic Table
IsiXhosa soMgaqo-nkqubo we-Mendeleev uvakaliswa ngokudala i-table yangokuqala yexesha leempawu, apho iimeko (i-periodicity) ziyabonakala xa izinto ziyalwe ngokulandelelana kwe-athomu. Uyabona? kunye nezikhala ezingenanto? Zizo ezo zinto zachazwa.
I-English Translation uDmitri Mendeleev (Mendeleyev), isazi samakhemisi saseRussia, wayengusosayensi wokuqala wokwenza iiferensi yexesha elifana nelinye esilisebenzisa namhlanje. UMendeleev waqaphela ukuba izinto zibonise iipropati zexesha elifanelekileyo xa zilungiswe ngenjongo yokwandisa ubunzima be-athomu. ukusuka kwiNgesi yesi-1 ed. yeMendeleev's Principles of Chemistry (1891, evela kwi-5 yesiRashiya).
de Chancourtois icwangcise itafile yexesha lokuqala lezinto ezisekelwe ubunzima be-atomic yezinto. Itafula yeCancanctois yexesha elibizwa ngokuba yi-vis tellurique, ekubeni i-tellurium yesixhobo yayiphakathi kwetafile. U-Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois
Umoya Oyingqapheliyo I-Helix i-Chemica okanye i-Periodic Spiral yindlela enye yokumelela iimpawu zeekhemikhali neziphathekayo zezinto. ECPozzi ngo-1937, kwiHackh`s Chemical Dictionary, u-3rd Edition, ngo-1944
Iinqununu eziphezulu kwetafile zibonisa ubuninzi bezinto. Izinto ezisezantsi kwisigxina somzobo zibonakaliswe ngobuninzi obuphantsi (ngaphantsi kwe-4.0), i-spectra elula, i-emf eqinile, kwaye ithambekele ekubeni ne-valence enye. Izinto ezikwinqanaba elingaphantsi lomzobo zinobuninzi obuphezulu (ngaphezu kwe-4.0), i-spectra eyinkimbinkimbi, i-weak emf, kwaye ngokuqhelekileyo i-valence ezininzi. Uninzi lwale miba yi-amphoteric kwaye inokufumana okanye ilahlekelwe ngama-electron. Izinto ezisekhohlo esezantsi kwetshathi zinokuhlawulwa kakubi kunye neefomu ze-acids. Izinto eziphambili zendawo zizalise iifowuni ze-electron zangaphandle kwaye ziyangena. Izinto ezisekunene ziphethe ixabiso elifanelekileyo kunye neefom.
Amanqaku e-Dalton's Element
UJohn Dalton wasebenzisa inkqubo yeendidi ezizaliswe ngokukhawuleza ukufanekisela izinto zeekhemikhali. Igama le-nitrogen, i-azote, lihlala ligama leli qakala ngesiFrentshi. kumanqaku kaJohn Dalton (1803)
I-Diderot's Alchemical Chart of Affinities (1778).
ITheyhula yePeriodic Table
Itheyibhile yeesetyhula yexesha eliqhelekileyo ngu-Mohammed Abubakr yindlela enye yokubhekisela kwitheyibhile yexesha eliqhelekileyo lezinto. Mohammed Abubakr, ummandla woluntu
Ulungelelaniso lweAlexandria lweeNto
Itheyibhile yeThathu yeZingqungquthela Ixesha eliqhelekileyo I-Aleksandria ilungiselelo lezinto zithenda ezintathu. Roy Alexander
Uluhlu lweAlexander luyitheyibhile yesithathu ejoliswe ekucaciseni ukuhamba kunye nobudlelwane phakathi kwezinto.
Le nto ikhululekile (i-domain yoluntu) itafile yexesha leempawu zeekhemikhali onokuzikhuphela, ukuprinta okanye ukusebenzisa okanye uthanda. Cepheus, i-Wikipedia Commons
Itheyibhile yePeriodic Periodic Table of Elements
Itheyibhile yenkcazo iqulethe kuphela izibonakaliso zezinto. Todd Helmenstine
Itheyibhile yePeriodic Minimum - Umbala
Itheyibhile yemibala yexesha eliqulethi iqulethe kuphela izibonakaliso zezinto. Imibala ibonisa amaqela ahlukeneyo edidiyelwe. Todd Helmenstine
I-Julia Stiles Falls yeRoyal "kwiNkosana kunye nam"
Uluhlu lokuHlola oluPhezulu lweKholeji
Indlela yokuthetha ngezopolitiki kwaye uhlale uhlobo lwabo